Voarara tsy hisidina kilasy voalohany ny mpitondra fanjakana eSwatini
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Voarara tsy hisidina kilasy voalohany ny mpitondra fanjakana eSwatini
Ny praiminisitra vaovao an'ny fanjakan'ny eSwatini (fantatra taloha amin'ny anarana hoe Swaziland) tamin'ny zoma dia nandrara ny fitsangatsanganana an-habakabaka voalohany ho an'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny governemanta ho ampahany amin'ny fampielezana ny volan'ny governemanta.
Ny praiminisitra Ambrose Dlamini, izay nandray ny asany iray volana lasa izay, dia nanambara ihany koa fa tsy hividy fiara vaovao ho azy izy fa handova ilay taloha nampiasain'ny teo alohany satria ny toekarena dia miady amin'ny fitomboan'ny fitomboana.
"Taorinan'ny fanamby ara-toekarena ankehitriny, dia nanapa-kevitra ny governemanta fa hametraka fanapahan-kevitra lehibe momba ny teti-bola vonjimaika hanatsarana ny fahamalinana ara-bola sy ny fanaraha-maso hahafahana mandany vola araka izay tratra," hoy izy tamin'ny fanambarana nataony.
Nilaza i Dlamini fa ny tompon'andraikitra ambony rehetra ao aminy ary ny minisitra dia "tsy hivezivezy intsony amin'ny kilasy voalohany fa amin'ny kilasy fandraharahana rehefa manidina amin'ny adidim-pirenena".
"Ny mpiasam-panjakana hafa rehetra dia hisidina amin'ny sokajy toekarena".
Ny fitsangatsanganana vahiny rehetra ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta dia hojerena mba hahazoana antoka fa manan-danja amin'ny firenena izy ireo.
Banky teo aloha sady mpanatanteraka nasionalin'ny MTN mpandraharaha finday malaza MTN, Dlamini dia notendren'ny Mpanjaka Mswati III ho praiminisitra volana lasa teo hisolo an'i Sibusiso Barnabas Dlamini izay maty tamin'ny volana septambra.
Nilaza i Dlamini fa manomana drafitra “fanarenana ara-toekarena” ho an'ny firenena izy izay mijaly amin'ny fahantrana lalina ary nitolona tamin'ny fampisondrotana ny toekareny.
Nilaza ny Banky iraisam-pirenena fa vina -0.6% no vinavina ny harinkarena faobe eSwatini tamin'ity taona ity indrindra vokatry ny "fihomboan'ny fanamby ara-bola sy ny ezaka fanamafisana ny hetra ataon'ny governemanta".
Ny fihenan'ny fidiram-bolan'ny governemanta sy ny fandaniam-bolam-panjakana avo lenta dia niteraka olana lehibe amin'ny deficit fiscal sy vola.
Ny mpanjaka, Mswati, iray amin'ireo mpitondra faratampony farany manerantany, izay manana vady 14 ary manan-janaka mihoatra ny 25, dia malaza amin'ny fandaniam-bola be amin'ny fiaramanidina tsy miankina sy ny lapan'ny mpanjaka raha 63% ny olony dia miaina anaty fahantrana.
Tsy nisy fampitandremana tamin'ny volana aprily, Mswati III dia nanamarika 50 taona hatramin'ny nahazoan'ny fireneny fahaleovan-tena tamin'ny fanjanahan-tany anglisy tamin'ny fanambarana fa ho fantatra amin'ny anarana hoe eSwatini ("tanin'ny Swazis") izy io.
Ilay fanjakana mihidy tanety, izay manana fifandraisana akaiky eo amin'ny lafiny ara-toekarena amin'i Afrika Atsimo, dia miatrika fanakianana iraisam-pirenena fa manakana ny tsy fitovian-kevitra ny governemanta, mampigadra ireo mpanohitra azy ary mandà ny zon'ny mpiasa.
Ahoana ny fomba hijerena tsara tarehy rehefa mandeha: The Indie Beauty Expo
Heritage Tree nohajaina tao amin'ny Trano Eldon House manan-tantara